WWW.JUUNGAL.COM | SOO BOQO WWW.Juungal.com
Posted on 29/03/2012 | Sawir
Nin in kabadan 2-bilood baraf ugu xayirnaa baabuurkiisa magalada Umeå
Nin ayaa laga soo saaray babuurkiisii oo uu ku xayirnaa mudo 2 bilood ah agagaarka magaalada Umeå ee waqooyiga Sweden.
Ninkaan ayaa la sheegay in uu 2 bilood ku xayirnaa barafka oo uu ku dhexjiray baabuurka. Sida uu ku badbaaday ninkaan oo 2 bilood aan ka bixin baabuurkiisa isla markaana aan haysan wax cunto ah ayaa lala yaabay balse waxaa la sheegay in uu sabab u yahay barafka.
Baabuurka oo uu daboolay baraf ayaa waxaa soo helay labo nin oo daawasho u tagay barafka iyadoo isla markiiba ay yimaadeen booliska oo loo cararay hospitaal ku yaala magaalada Umeå. Ma uusan hali karin xitaa ninkaan markii loo yimid.
Sababta uu ninkaan ugu xayirmay barafka iyo waxa uu ka qabanayay agagaarka Umeå isaga oo degan koonfurta Sweden ayaan wali la ogeyn.
Posted on 18/02/2012 | Sawir
Sidee Ku Kasban Kartaa dadka kale niyadooda.
Barnaamijkaan waaa mid aan ugu tala galnaya in aan wax badaan kaag hadalno Arimaha dhalinyara Qasataan Dhanka hasawaha Ama Sida loo Abooro Saaxib Ama Jaceyl Sidaa daradeed Anakoo soo aroorinaay Sidii Aad ku kasban laheed saaxiib wnaagsan ama jaceylkaag si aad qof uga dhaa dhacsiiyo sida aad ugu tahay dacad ama qalbigaag uu yaha Mid nadifaaa
ulimada ku takhasustay cilmiga bulshadu wexey yiraahdaan, horumarka qofku uu noloshiisa ka gaaro waxaa asal u ahay boqolkiiba 85% qaab la dhaqanka iyo xiriirka uu la leeyahay dadka iyo bulshada halka boqolkiiba 15% ay tahay xirfaddaha/aqoonta cilmiyeed ee uu leeyahay wexey doonto ahaatee. Sidaa daraadeed ayaanu waxaan arrintaan ka diyaarinay maqaal. Xikmadda ku jirta maqaalkana waxaa laga soo ururiyey buug uu qoray Dale Carnegie 1936 marar dambena dib loo daabacay.
Fiiro gaar ah: Akhristoow ha fududaanin oo markii aad aragtid magaca qoraaga ha oranin fikir gaalo ayuu noo keenay. Ogaadana wax walba oo wanaagsan, diinteenana waafaqsan meesheey doonaanba haka yimaadeene waanu qaadaneynaa. Wixii xun oo aan diinteena waafaqsanayn meesheey doonaan haka yimaadeene waanu ka tegeynaa.
Haddaba su’aashu wexey tahay maxaa nagu xambaaray inaan mowduucan siino ahmiyadda weyn ee intaa le’eg. Jawaabtu wexey tahay akhristoow qofba qofkuu ka saaxiibo badan yahay, bulshada uu la nool yahayna saameyn weyn ku yeelan karo, ayaa sidoo kale qofkaasi firkirkiisa amase mabda,a uu aaminsan yahay uu ka gadi karaa bulshada uu la nool yahay.
Hadaba akhristoow qoraagu wuxuu buugiisa ku soo bandhigay farsamooyin iyo xeelado fudud oo aanu ku kasban karno saaxiibo badan oo wanwanaagsan, sidoo kalena bulshada aanu la nool nahay saameyn weyn ugu yeelan karno.
Xeeladahii ama farsamooyinkii waa kuwan soo socda ee la soco:
6 siyaabood oo aad ku kasban kartid kalsoonida iyo jacaylka dadka.
1. Tus si dhab ahna u muuji inaad tixgelin gaar ah u hayso dadka
2. Dadka u waji furnoow, una dhoola caddee
3. Dadkana ugu yeer magacyada wanwanaagsan ee ay ugu jecelyihiin in loogu yeero
4. Noqo dhegeyste fiican, dadkana ku dhiiri geli iney fikirkooda dhiibtaan.
5. Ka hadal wixii qofka aad la hadleyso jecelyahay, qalbigiisana farxad gelinaya
6. Si dhab ah u dareensii qofka aad la hadleyso, inaad ahmiyad weynu hayso waxa uu ka hadlayo.
12 siyaabood oo aad fikirkaaga dadka uga dhaadicin kartid.
1. Iska ilaali dooda ah rag iska dhici, kana fogoow muranka.
2. Ixtiraam fikirka qofka kale, weligaana si toos ah, ha ugu oranin waad khaldan tahay.
3. Haddii aad khaldan tahay, si degdeg ah khaladkaaga u qiro, tusna inaad ka xun tahay khaladka kaa dhacay.
4. Weligaana adeegso wanaaga, dhimrinta iyo turidda. Kana fogoow ad adeyga iyo qalfsanaanta.
5. Weydii marka ugu horeysa qofka aad la hadleyso, su’aal ay jawaabteedu noqoneyso haa. Taaso ah macnaheedu yahay dareensiin, la dareensiinayo qofka lala hadlayo in wax la wadaago.
6. Isku day una ogoloow in qofka kula hadlayaa uu wax badan hadlo.
7. U ogoloow qofka aad la hadleyso inuu fikirkiisa iyo aragtidiisa soo bandhigo.
8. Isku day inaad si daacad ah u fahanto qofka kale aragtidiisa iyo dareenkiisa.
9. Isku day inaad la tacaadufto qofka kale aragtidiisa iyo dareenkiisa.
10. Gudbinta aragtidaada u adeegso, xikmad, dhaqan suuban, talo iyo tusaalayn.
11. Aragtidaada u soo bandhig qaab caqli gal oo ku salaysan waaqaca jira.
12. Iskana illaali adiga iyo qofka aad la hadleyso inuu idin dhexmaro wax baratan ah.
Waxaan dhammaan akhristayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ogeysiineynaa iney jiraan culumo badan oo muslimiin ah oo ku takhasustay cilmiga bulshada buugaag badana ka qoraty. Culumadeena sheekha ugu caansan ee wax ka qoray kasbashada quluubta banii,aadamka iyo xiriirka bulshada waxaan jeclahay inuu yahay sheikh Ibn al qayyim Al jawziyah Allaha u naxariistee. Waxaanu soo jeedineynaa in bulshada loo soo bandhigo maqaalo koobkooban oo laga soo diyaariyo kutubta noocaas oo kale ah si bulshadu loogu wacyi geliyo qiimaha iyo doorka ay leeyahay kasbashada quluubta ban,iiaadamku iyo saameynta bulshadu.
Hadaba Qoraalkaan Lama qadan Karo ilaa Qoraaga Adan Kuxuseenin Ama Adan ka amarqaadan
Posted on 01/02/2012 | Sawir
Ivory Coast Oo U Soo Gudubtay Wareega 8da Koobka Qaramada Afrika, Iyo Burkino Faso Oo Hartay.
Xulka Ivory Coast ayaa xaqiiqsaday booska wareega 8da ee Koobka qaramada Afrika ka dib markii ay labo gool iyo waxba kaga soo gudbeen xulka Burkino Faso kulan ka tirsanaa Group B.
Salomon Kalou ayaa hogaanka u dhiibay Ivory Coast daqiiqadii 16aad ee ciyaarta ka dib markii uu shabaqa ku hubsaday karoos ka yimid Didier Dorgba.
Gool uu iska dhaliyay Bakary Kone ayaana u xaqiijiyay Ivory Coast inay u soo baxdo wareega xiga waxaana tartankan isaga hartay xulka Burkino Faso oo guuldaradii labaad ee wareega Groupyada ay soo gaartay.
Didier Zokora ayaa ku soo laabtay xulka Ivory Coast ka dib markii kulankii hore uu ku seegay ganaax. Waxaana weerarka Ivory Coast ka wada ciyaarayay Drogba, Kalou iyo Gervinho.
Kulanka kale ee Group B waxa uu dhexmaray xulalka Angola iyo Sudan, waxaana ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah.
Ivory Coast oo Groupkaan B haatan banaanka ka taala ayaa leh 6 dhibcood, waxana ku soo xigta Angola oo ciyarta xigta la ciyaari doonta Ivory Coast oo leh 4 dhibcood, Sudan oo rajo yar leh ayaa leh 1 dhibic halka Burkino Faso aysan wax dhibic ah laheyn.
Maanta waxaa la ciyaarayaa kulamada labaad ee Group C:
Posted on 27/01/2012 | Sawir
Maxaa Kajira In Carlos Tevez Uu Wajiga Xanjo uga Tufay David Silva ,Muxuusa Silva Ka Aamin-sanyahay Carlos Tevez
Xiddiga u ciyaara kooxda man-city iyo qaranka reer spain david josue jimenez silva ayaa wareysi xiisa badan siiyay Tv-ga caanka ah ee ETB-SAT ee laga leeyahay dalka spain ayaa waxa uu bahdilay weerar-yaanka qaranka arjantiin iyo kooxda manchester city carlos alberto tevez
wareysigan laga qaaday xiddiga david silva ayaa aad u dheeraa waxaase ugu xiisa badan ama ugu mihiimsan mar laweydiiyay silva waxa ka jira in carlos tavez labo bil ka hor xanjo uu ruugayay wajiga kaga tufay laacib devid
hayeeshee ciyaar-yahan david josue silva oo ficilkaasi foosha xun qirtay ayaa yiri “waa sax weey jirtaa arinkaas laakiin inaan hadda ka hadlo ma doonayo maxaa yeelay waxaa arintan si deg deg ah ku xaliyay maamulka man city”
sidoo kale xilligii uu carlos tevez xanjada uu ruugayay wajiga kaga tufay david silva waxaana uu ku eedeeyay inuu silva ma’suul ka ahaa amaba uu ku diray inta badan laacibiinta kooxda man city oo hadalkii ka goostay weeraryaan carlos alberto tevez
ciyaaryahan david silva oo mar kale ka jawaabay su’aashaas kulul maadaama lagu eedeeyay inuu qoorta isku giliyay ciyaar-tooyda man city iyo weerar-yahan carlos tevez waxaana uu yiri isaga oo qoslaaya “dhibka heysta carlos ma ahan mid yar maxaayeelay labadii isla-hadashaa waxa uu leeyahay aniga ayeey i xamanayaan waana cuqdad nafsi haya isaga jinni iyo cudur noocaas ah in taan ciyaaraha k/cagta ku soo dhex-jiray waligey ma arkin”
hayeeshee laacibkii hore ee kooxda valencia ayaa sheegay in uusan garaneyn waxa uu ku til-maamo carlos alberto tevez kaas oo hadda ka maqan kooxdiisa
Posted on 17/01/2012 | Sawir
Posted on 12/01/2012 | Sawir
Sweden ayaa degenaansho siisay dad gaaraya 93000 oo qof sanadkii la soo dhaafay balse tirada magangalyo doonka ayaa la sheegay in ay kala bar hoos u dhacday sanadihii la soo dhaafay.
Waxaa aad sare ugu kacay dadka Sweden ku yimaada shaqada ee ka yimaada wadamada nabadu ka jirto iyadoo qaxootigu aad hoos ugu dhacay. Sanadkii 2011 ayaa waxaa qaxootinimo sharciga lagu siiyay 13,000 oo keliya taasoo ka dhigaysa tiradaas midii ugu yareyd ilaa sanadkii 2007.
Dadka ugu badan ayaa ka yimid dalka Afghanistaan iyadoo dhinaca kale magangalyo doonka Soomaalidu uu ilaa kala bar hoos ugu dhacay. Arintaas ayaa ka dambeysa ka dib markii Sweden ay joojisay mideynta reeraha Soomaalida sanadkii 2010. Si kastaba ha ahaatee, dadka ku yimaada mideynta reeraha ee ka yimid wadamada kale ayaa ahaa kuwa ugu badan ee Sweden deganaanshaha ka helay sanadkii hore.
Dhinaca kale waxaa aad u kordhay dadka ku yimaada shaqada sida shaqaalaha nadaafada, kombutarada ee ka yimaada wadamada aasiya sida